पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ⋆ TAG ⋆ JINDAGANI.COM
Home » पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
Tag: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
भदौ १४, २०७८	0
साउन ३२, २०७८	1
फागुन शुरु हुँदै थियो, जनयुद्घ दिवस आयो । युद्धका लडाकुका लागि खासगरी त्यो उत्सव थियो । हामीले भेला, अन्तरक्रिया, अनुभव साटासाट गर्दै मनायौं । जिल्लाबाट विस्थापित भएकाहरु मध्ये केहीलाई घर फर्काउने काम पनि भयो । त्यसै बीचमा क्षेत्रीय व्यूरोको बैठक बोलाइयो, म रोल्पातिर लागें । रोल्पा पुगेपछि देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ बलावती शर्मा, सिन्धुलीकी सीमा, मनु हुमागाईं दिदीसँग भेट भयो । उहाँहरुबाट बैङ्लोर बैठकमा उठेका अन्तरसंङ्घर्षको विषयबारे केही कुरा जानकारी पाएँ । त्यतिबेला भारतबाट बरबर रावको नेतृत्वमा सांस्कृतिक टीम पनि रोल्पा आएको रहेछ मलाई वहाहरूसित भेटदा पुराना दिनको याद आयो, निकै खुसी लाग्यो । क्षेत्रीय व्यूरो बैठकमा पार्टी हेडक्वाटर विशेष क्षेत्रमा आउने थाहा भयो । हेडक्वाटरको सुरक्षाको जिम्मा जनमुक्ति सेनाले र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ क्षेत्रीय ब्यूरो कमिटीले लिने निर्णय भयो ।
जेष्ठ २४, २०७८	0
सिबिआइका इन्स्पेक्टर अमर सिंहका माध्यमबाट मैले धेरै सूचना पाउँथे । उनले नै मलाई मेरो घरको फोन ‘ट्रयापिङ’ गरिरहेको र निगरानी बढाएको सूचना दिएका थिए । त्यो सूचनापछि मैले परिवारलाई चार महिनाको अवधिमा कहिल्यै फोन गरिनँ । भेटनु परेमा शेर सिंह खत्री दाइसँग बोलाएर मेहराली, धौलाकुवामा भेट्थेँ । मसँग मोबाइल फोन थियो, जसको नम्बर पार्टी र भाइचारा संगठनका सीमितलाई मात्र दिएको थिएँ । त्यसका वाबजुद गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेतृत्वलाई भेट गराएपछि निगरानी बढेको थियो ।
जेष्ठ १२, २०७८	3
मंसिर २१, २०७६	0
अलि धेरै पढ्यो भने मान्छेको दिमाग खराब हुन्छ । बाबुरामजी देख्नुभएको छ नि कहाँ पुग्नुभयो ! बढी पढेर के, जान्ने भएर । अवसर आएको बेलामा बौद्धिक ज्ञान क्षमता भएको क्रान्ति, पार्टी, र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले लाखौंलाई प्रभाव पारेर जाने संघर्षमा पो भाग लिनुपर्छ त, यो सब छोडेर, यही महासंघ पनि छोडेर, हुटिट्याउँले स्वर्ग थाम्छु भनेर हुन्छ ? यो हुनी कुरा हो ? नहुनी–नहुनी कुरा ।